Amahhotela ashibhile - Injini yokusesha yamahhotela nazo zonke iziqinisekiso!
Ngabe ukhona ngifuna ihhotela elishibhile endaweni ethile emhlabeni? Ngenxa yendawo yethu ongakwenza thola ihhotela olifunayo ngentengo eshibhe kwi-inthanethi nangazo zonke iziqinisekiso.
Injini yokusesha yamahhotela eshibhile
Ngokusebenzisa injini yokusesha yamahhotela edlule ungakwazi thola ihhotela olidingayo futhi ugcine sibonga amanani ethu amahle. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, kufanele nje ukhombise lapho ufuna khona ihhotela, usuku lokungena nokuphuma ehhotela kanye nenani labantu kanye / noma amakamelo owadingayo, chofoza inkinobho yokusesha bese kuba yilokho. Ukusuka lapho injini yethu yokusesha izokwenza umlingo odingekayo ukukuthola Intengo Engcono Kakhulu kusuka kuyo yonke i-inthanethi. Yini elula?
Uma ucabanga ngokuhlela iholide elihle, kufanele unake amaphuzu ambalwa ukuze ukufeze. Enye yezinto eziphambili ukufuna indawo yokuhlala. Ngaphakathi kwayo sikhetha ukubheka i- amahhotela ashibhile. Ngoba kuzo ungathola izimo ezihamba phambili ngaphandle kokuchitha imali eshisiwe. Thola konke odinga ukukwazi ukuze ukwazi ukuthola kalula lelo hhotela lamaphupho akho! Uma ufuna ukuthola intengo engcono kakhulu kufanele nje Chofoza lapha.
1 Injini yokusesha yamahhotela eshibhile
2 Izinzuzo zokubhuka kwamahhotela online
3 Ungayibhuka kanjani ihhotela online
4 Thola amahhotela ashibhile
5 Ukubuyekezwa kwamahhotela
Izinzuzo zokubhuka kwamahhotela online
Ngenxa yokuthi i-intanethi isingenile empilweni yethu, seyivele ilula kancane. Kakhulu kangako for hlela uhambo, akusadingeki sisuke kusofa wethu. Sizokugwema ukulinda isikhathi eside kunoma yiliphi ihhovisi lezokuvakasha noma ocingweni. Kepha ngeke sigcine ngaleso sikhathi kuphela, kepha sizokwazi nokubala amanani entengo amahle kakhulu kwezethu ukuhamba nge-inthanethi. Kunamakhasi amaningi anikezela izaphulelo ezinkulu nezinzuzo eziningi lapho ubhukha amahhotela online, ngoba azikho izindleko ezithile ama-ejensi akhokhisayo.
Amanani: Ngokufunwa okungaka, i amadili ehhotela nabo sebekhulile. Ngaphezu kwalokho, uma sibheka kahle, sizohlala songa imali ethe xaxa kunalokho uma sibhuka kuwebhusayithi yehhotela uqobo. Kuhlale kunconywa ukusesha amawebhusayithi wehhotela futhi wenze ukuqhathanisa okulula. Thola intengo engcono kakhulu LAPHA.
Comfort: Njengoba sishilo, akufani nokuthi siziveze ku- ejensi yokuvakasha kunokuhlala endlini yethu. Lapha sizoba nesikhathi esiningi ngangokunokwenzeka ukuze sikwazi ukukhetha indawo yethu yokuhlala kahle. Ungapheqa amawebhusayithi ahlukile futhi uqhathanise zonke izinhlobo zamahhotela, kokubili okuhle nokubi nangaphambi kokubeka unyawo kuwo.
Ukutholakala: Akunandaba wenza ukubhuka ngasiphi isikhathi. Amawebhusayithi ahlala ekulungele ukuwamukela, ekuseni noma uma uthatha isinqumo ebusuku.
Ukuqinisekisa: Ngemizuzwana embalwa nje, uzobe usuthole isiqinisekiso sokubhukha okushiwo. Okungukuthi, i- ukuqinisekiswa ngokushesha kuzoba ukuphepha kwakho okuhle kakhulu. Ngayo, ngeke kusaba khona amaphutha, okuphambene nalokho. Uzoba negumbi lakho eliqinisekisiwe ehhotela elikhethiwe.
Ungayibhuka kanjani ihhotela online
Manje njengoba sesazi izinzuzo ezinkulu zokuthola amahhotela nge-inthanethi, sizoya kwesinye isinyathelo. Uyazi ukuthi ubhukha kanjani ihhotela online?. Futhi kungenye yamaphuzu alula kakhulu esingakwenza ngaphandle kwezinkinga ezinkulu. Sidinga i- othole ihhotela, esizothola ekhasini. Kuyindlela elula lapho ungeke ubuzwe imininingwane yakho yangasese, kepha lapho uya khona lapho ufuna ukuya eholidini khona. Ngaphezu kwalokhu, kuzophinde kube lula kuwe ukuthi ukhethe izinsuku zokufika nezokuhamba. Uma lokhu sekwenziwe, kuzofanele sikhethe igumbi ngokuya ngabantu.
Lapho sigcwalise imininingwane ehambisanayo, kufanele sicindezele inkinobho "yokusesha" futhi izosishiya wonke amahhotela kanye nezinketho ezitholakalayo lapho siya khona. Uma ngalesi sikhathi kungekho Amakamelo amahhala, ungahlala ushintsha izinsuku futhi futhi uhlole izinketho ezintsha. Ngendlela efanayo, kuzovela uhlu olunamahhotela amaningana. Lapho ungachofoza kulowo nalowo ukubona izimo zawo, izithombe zamakamelo, indawo ezungezile, njll.
Thola amahhotela ashibhile
Lapho sesingene ohlwini lwamahhotela, sizothola okunikezwayo okuhle kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi izinketho ezinhle kakhulu zizohlala zivela ukwenza lolu hambo lubize kancane. Sihlala sicabanga ukuthi ukuthengiselana ngeke kuvele endleleni yethu, ngoba akukho okunye okuqhamuka eqinisweni. Kusuka kokukhulu ukunikezwa kwe- wonke amahhotela afaka wonke umuntu kuze kube uhhafu webhodi noma ngebhulakufesi nje.
Izinsuku: Izinsuku yilezo kwesinye isikhathi ezingakhuphula izindleko zehhotela. Siyazi ukuthi kunezinkathi eziphezulu nokuthi kuzo, amanani ayenyuka kakhulu. Yingakho, uma nje singakwazi, sizoguqula izinsuku. Akufani ukuhamba ngoLwesihlanu kunangoLwesine ntambama.
Isimo sendawo: Kungakhathalekile ukuthi siya kuphi, kuhlala kunokwenzeka ukukhetha amahhotela angekho enkabeni kakhulu. Ngale ndlela, siqinisekisa ukuthi intengo nayo izohluka ngokuphelele. Sesha phakathi kwe- izindawo zokuhlala eziseduze neziteshi, yize zisuswe kancane endaweni enkulu.
Ukubhuka: Yize into esobala kakhulu ukwenza ifayela le- ukubhuka kusengaphambili, kwesinye isikhathi akunakwenzeka. Ukubhuka kusenesikhathi kungaba ukonga okukhulu. Vele, kulezi zinsuku, sinamahhotela athile anikezela ngezaphulelo ezinhle uma sekusele amakamelo ambalwa wamahhala. Njalo kufanele unake kakhulu!
Lapho senza ukubhuka, sihlala sifuna ukwazi ukuthi senza okulungile yini. Enye yezindlela ezinhle kakhulu esinazo ngalokhu, yilezi ukubuyekezwa kwamakhasimende. Yize zizohluka kakhulu, zingahlala zisisiza kancane ukuthola umbono walokho esizokuthola. Okokuqala, imibono enjalo ivame ukuhambisana nenombolo. Kuzoba yisikolo esinikezwa izinsizakalo ezahlukahlukene ihhotela elinalo.
Uma une-6 ngaphezulu, khona-ke singakhuluma ngamahhotela athakazelisa kakhulu. Vele, ungahlala uzivumela ukuthi uthathwe yilabo abangenanani elincane. Kalula nje, sikweluleka ukuthi ufunde umbono ngamunye kahle ukuze wazi amaphuzu aphansi kangako. Phakathi kwabaningi izilinganiso uzokwazi ukuthi ngabe inokuhlanza okuhle nokunethezeka. Isevisi nobungani nokuthi umsindo ungelinye lamaphuzu amabi noma indawo ayifanele.
Kubalulekile futhi ukubheka i- izikhathi zokufika nokwamukela. Kuhlale kunconywa ukuthi la ngamahora angama-24. Ngendlela efanayo, kuzofanele silungise zonke izinsizakalo abasinikeza zona. Ngalesi sizathu, futhi ukugwema isimanga, kuyadingeka ukuthi ufunde konke ngokucophelela. Yize ukwenza konke lokhu kujabulise ngokwengeziwe, akukho okufana nokusisiza ngomphumela wokubuka. Izithombe ziphelele ukuxhasa imibono futhi zisinikeze umbono obanzi wemvelo.
Njengoba sibona, kubo bonke abahloli bamazwe, ukuthola amadili amahhotela nokuhlela uhambo ku-inthanethi kungukudlala kwengane. Noma kungathatha isikhashana, kuzohlala kungukuzijabulisa okuhle futhi siyazi ukuthi sisezandleni ezinhle amaholidi aphansi ongenakulibaleka.